Rajoelina sy ny forongony : Kidnapping sy “bois de rose” -
AccueilRaharaham-pirenenaRajoelina sy ny forongony : Kidnapping sy “bois de rose”
Rajoelina sy ny forongony : Kidnapping sy “bois de rose”
07/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“…Vao 36 monja i Andry Rajoelina dia nahavita nanongam-panjakana”, hoy i Dadafara tao amina hainoamanjery tsy miankina iray. Azo antoka fa tsy hahazo anjara fitenenana intsony ity mpivarotra Behringer ity.
Levallois Perret, Saint-Maur-des-Fosses… Saron’ny Fitsarana frantsay ny vola maloto maherin’ny 100 miliara nodiovin’i Mamy Ravatomanga tamin’ny alalan’ny fividianana ireo trano ireo. Famotsiam-bola azo avy tamin’ny fanondranana « bois de rose », fanodinkodinam-bolam-panjakana tao amin’ny JIRAMA no hanenjehan’ny PNF azy. Nangiana tsy niloa-bava intsony ny Madagate an’i Jeannot Ramambazafy matihanina amin’ny fanaovana « investigation ». Tsy sahy miresaka ihany koa ireo hainoamanjery mpomba ireto mpanongam-panjakana araka ny nambaran’i Dadafara ireto.
Kidnapping fito be izao no nitranga tao anatin’ny telo volana nandritra ity governemanta MAPAR ity. Miliara maro no efa lasan’ireo olon-dratsy tamin’izany, ary tena tebiteby sy fitaintainana isan’andro no iainan’ireo mpandraharaha, indrindra ireo teratany Karàna. Efa nitondran’ny La Ligne de Mire fanamarihana ihany moa ity resaka kidnapping ity satria dia teny Ivandry hatrany no nitrangan’izany. Mazava nefa ny resaka ankeitriny, olon’ny MAPAR akaiky an’i Andry Rajoelina no voasambotry ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana.
Izany hoe, mpanao kidnapping sy “bois de rose” no manodidina ity kandidà mpanongam-panjakana vao avy nasian’i Dadafara tsindrim-peo tsara mihitsy nandritra ny fandalovany tao amin’ilay hainoamanjery tsy miankina iray ity. Efa hivoaka tsy ho ela eto amin’ny gazety ny antsipirian’ny fanondranana “bois de rose” nandritra iny Tetezamita iny, ary amin’izay fotoana izay dia samy hiteny avokoa isika hoe “tsy mahagaga raha manao izay fomba rehetra hiverenana eo amin’ny fitondrana ireto “putschiste” tarihin’i Andry Rajoelina ireto.”
Mitaky ny hisian’ny fifidianana mangarahara, eken’ny rehetra, madio ary azo antoka ny maro an’isa amin’ireo kandidà 36 nihaona tamin’ny CENI teny Nanisana omaly. Vaky bantsilana teo avokoa ireo lesoka, ireo kitoatoa ary ireo endrika fanamparam-pahefana ...Tohiny
Tinoka Roberto : Niaiky fa namita-bahoaka
Nandray fepetra ny fanjakana-VOASAMBOTRA NY MPANAFINA VARY
Governemanta : Minisitra vaovao roa sy sekretera-panjakana vaovao roa